CARE Kenya - Puntland Mirror Believable Media Website
[ June 20, 2021 ] TPEC oo ku dhawaaqi doonta tirada codbixiyeyaasha saddex degmo	Somalia
[ June 20, 2021 ] TPEC to announce number of registered voters in three districts on June 27	English News
Soomaaliya ayaa kamid ah wamada ay isbadalka cimilada saameyn weyn ku yeelatay. [Sawir Hore]
Ugu yaraan 15 qof oo ku dhimatay qarax ismiidaamin ah oo ka dhacay Muqdisho
Muqdisho-(Puntland Mirror) Ugu yaraan 15 qof ayaa lagu dilay weerar ismiidaamin ah oo ka dhacay magaalada Muqdisho maanta oo Talaado ah, sida ay sheegeen ilo-wareedyo katirsan haayadaha ammaanka. Qof isa soo miidaamiyay ayaa beegsaday xarun [...]
Al-Shabab killed four men accused of spying
Kismayo-(Puntland Mirror) Al-Shabab armed group publicly killed four men accused of spying for the Somali government, residents and Al-Shabab officials confirmed. The execution took place at a square in the town of Jamame district of [...]
Ciidamadda NISA oo ganacsade Maxamed Mire Cali Yuusuf muddo kooban ku xiray Muqdisho
Muqdisho-(Puntland Mirror) Ganacsade Maxamed Mire Cali Yuusuf ayaa ciidamadda NISA muddo kooban ku xireen magaalada Muqdisho, sida ay sheegayaan ilo-wareedyadu. Ganacsadaha oo sidoo kale loo yaqaan “Soo Dareeri” ayaa Muqdisho tagay horaantii asbuucaan. Dabayaqaadii asbuucii [...]